Taliyaha Amisom oo loo magacaabay Sargaal Jabuutiyaan ah – Radio Muqdisho
Taliyaha Amisom oo loo magacaabay Sargaal Jabuutiyaan ah
Wakaalada wararka ee Jabuuti ayaa shaacisay in Ururka Midowga Afrika Taliye cusub u soo magacaabay Ciidamada Nabad ilaalinta Amisom ee ka jooga Somaaliya.
Taliyaha cusub oo lagu magacaabo Generaal Cusmaan Nuur Subagle, waxa uu u dhashay dalka Jabuuti, wuxuuna sida ay Wakaaladu sheegtay la wareegi doonaa hoggaanka 22 kun Ciidan kala duwan ee howlgalka Amisom Somaliya ka jooga kana kala socoda dhowr dal oo ka tirsan midowga Afrika.
Xilkan Taliyenimada Ciidamada Amisom ee Soomaaliya ee loo magacaabay Generaal Cusmaan Nuur Subagle ayaa waxaa hore u hayay Gereraal Kenyaati laga soo billaabo dhammaadkii bishii Dishember 2015kii.
Sida ay Wakaalada Wararka ee Jabuuti qortay waxay magacaabista Taliyahan cusub ku soo beegmeysaa xilli howlgal xooggan lagula jiro kooxda Alshabaab sidii looga saari lahaa degaanada ay weli ku hrsan yihiin iyo in ciidamada Dowlada lagu taageero howlgaalkaasi.
Taliyaha cusub ee loo soo magaagaacay Ciidamada Amisom ee Somaaliya Generaal Cusmaan Nuur Subagle ayaa hore sanadihii 2012-2013 kii Taliye ugu noqday howgalka Ciidamada Amisom ee Somaaliya, wuxuuna si joogta uga qeyb gala shirka ay yeelanayaan gudiga wada jirka ah ee looga hadlyo arrimaha Mileteriga ee hoggaanada dalalka ciidamadooda ka joogaan Somaaliya.
Shiekh caan ah oo Kismaayo lagu dilay